The Latest News musi International Trade - Alietc.com
March 3, 2021 0 mashoko
Michaels Retailer Kuenda Yakavanzika
Michaels Kambani yakazivisa munaKurume 2, zvasvika pakubvumirana neApollo Global Management kutora chikamu mukutenga kwakakosha madhora mashanu emadhora. Mukubhadharisa, Apollo anozobata Michaels stock ($ 5 pamugove mumari). Iyo yekutengesa michina kambani ichaenda yakavanzika, iyo ine nhoroondo yekuve yakavanzika muna 22 (yakawanikwa ne […]Read More
March 2, 2021 0 mashoko
Asia Zvakanaka Kuseri kweEurope muEV
Fitch Solutions yakaziviswa nguva pfupi yadarika kunyangwe China iri pakati pevanopa hukuru indasitiri yemagetsi magetsi (EV), Asia inodonha kumashure kweEurope. Musoro we Autos Research paFitch Solutions, Anna-Marie Baisden, akati izvi imhaka yekuti hurumende dziri muEurope dziri kutora matanho akakura ekuwedzera mumusika weEV. Kana zvasvika kune bhizinesi reEV muAsia, China inouya […]Read More
March 1, 2021 0 mashoko
Hupfumi hweIndia Kudzoka Panzira
Pane kuwedzera nekukurumidza muhupfumi hweIndia, zvichiratidza kupora, Narendra Modi, chipangamazano wezvehupfumi muIndia akadaro nguva pfupi yadarika. Huwandu muhupfumi hwasimukira: kukura ne0.4% gore pamusoro pegore mukota yechina. Iyi ndiyo nguva yechipiri neyechitatu yekota yakaona kuderera kwehupfumi, 7.3% uye 24.4% zvichiteerana. Inoteedzera kune yazvino GDP data, […]Read More
February 28, 2021 0 mashoko
Porsche kuFundraise paRimac
Chikamu cheVolkswagen (VW) Porsche chichajoinha chikamu chemari cheRimac Automobili Car Manufacturer kuti vatore 157 miriyoni kusvika kumadhora 181 miriyoni, sezvakataurwa naMate Rimac. Yakagadzirirwa kupedzisa mukati memwedzi miviri kusvika mitatu, musangano mutsva wekutsvaga mari uchaitwa kupera kwa2, akadaro. Danda raPorsche muRimac Automobili, 3%, inogona […]Read More
February 27, 2021 0 mashoko
Flydubai Zvirongwa Zvekuvandudza Ndege muRomania
Mwedzi Unotevera, Flydubai Airline ichavhura sevhisi kuCluj-Napoka, guta rechipiri rakakura reRomania Kubva munaKurume 20, iye anotakura achamhanya kaviri pasvondo pakati peDXB (Dubai) uye CLJ (Cluj) nhandare. Dubai Aviation Corporation yatobhururuka kaviri pazuva pakati peDubai International neBucharest. Kuwanda kwendege dzinoenda kuRomania kunosvika gumi nematanhatu pavhiki se […]Read More
February 26, 2021 0 mashoko
Etsy's Premature Kubatsirwa
Josh Silverman, CEO weEtsy Company, mubvunzurudzo neCNBC muna Kukadzi 26 akataura kuti hazvisi pachena kuti 2021 ichave yakaita sei sedenda zvine hungwaru asi kambani inowanzobuda. Akaenderera mberi paine kukura kunoshamisa mue-commerce gore rapfuura, nekukwira kweanopfuura 40% gore pamusoro pegore; uye Etsy akakwanisa […]Read More
February 25, 2021 0 mashoko
PepsiCo's Cocktail Mixers Ichizotangwa muMwedzi
Mucherechedzo mutsva, unonzi Neon Zebra, uchatanga munguva pfupi iri pasi pePepsiCo, kambani yekuAmerica yezvinwiwa. Iko kutanga kwechinwiwa chekumusha kwakatanga makore maviri apfuura, kunyangwe denda risati rasvika. Cocktail mixers, anopfuura masvondo makumi mashanu nemaviri achipera muna Kukadzi 52, akaona kukwira kupfuura 13% zvichienzaniswa negore rapfuura. Saizvozvo, iyo Coca-Cola Kambani yakatanga […]Read More
February 24, 2021 0 mashoko
Gambia's 2025 Target YeMagetsi Kuwana
Vachitaura kuBrikama pachirongwa chemiti che20MW, mutungamiri weGambia, Adama Barrow akati vanhu vanoonekwa havawani magetsi kunyange hazvo hurumende yakaedza kugadzirisa nyaya iyi kubva muna 2017. Vakati hurumende ichapa mukana wemagetsi kunharaunda 685. munyika pamusoro peanotevera 3 […]Read More
February 23, 2021 0 mashoko
India's Pharma Kumisa Kuvimbika kubva kuChina
Mukumuka kwemutsara pakati peChina neIndia pamusoro pemuganhu munaJune 2020, India iri kutarisa kuzvigutsa mune zvinoshingairira mishonga zvinoshandiswa (API). Zvisinei nekuve nemukurumbira pasi rese nekugona kukuru kwekugadzira zvinodhaka, China yakapa nyika iyi hafu yeAPI yaida mugore ra2019.India, zvakare, yaifanirwa ku […]Read More
February 22, 2021 0 mashoko
Taco Bell Inobatanidza Chicken Sandwich Chain
Iyo yekutsanya-chikafu chikafu kambani, Taco Bell, ichaenderera mberi neyekutanga kuyedza kwechinhu chitsva munzvimbo dzakaita seTennessee, Nashville, uye Charlotte. Seye yechina kambani yekukurumidza-chikafu ine yakakurumbira huku sangweji, yakaziviswa chete mwedzi wapfuura, Taco ichaenda kune huku seimwe nzira yemombe. Chikafu chiri kuwedzera zvichitevera […]Read More
Kudya & Zvekurima
Trade Fairs uye Exhibitions
Agri & Chikafu Kugadzira Machina & Midziyo Zvekurima Mashini & Midziyo Zvinwiwa Zvinwiwa, Fodya & Zvakafanana Zvigadzirwa Apparel Apparel Design Services Auto Zvikamu & zvishongedzo Runako & Kuchengeta Kwemunhu Beverages Chemicals Kuvaka & Zvivakwa Consumer Electronic Magetsi Zvishandiso & Zvekushandisa simba Unyanzvi & Mishini yekuvaka Zvekurimisa - Mafetiraiza, Mishonga yekuuraya zvipuka & Mbeu Zvigadzirwa zvePurazi - Zviyo, Zvibereko nezvimwe Hove & Hove Zvigadzirwa Kudya & Zvekurima Chikafu & Beverage Mashini fenicha Zvipo & Crafts Hutano & Kurapa Health Care Supplement Home & Garden Home Appliance Horticulture - Maruva, Zvirimwa & Zvakafanana Zvigadzirwa Vacheche & Vacheche Clothing Mombe, Nyuchi, Nyama & Zvigadzirwa Zvemhuka Mutoro Mabhegi & Mhosva michini Men's Clothing Zvicherwa & Metallurgy Office & School Supplies Zvimwe Zvimwe Zvemazingira Mamwe Machini & Maindasitiri Midziyo Packaging & Kudhinda Yakagadziriswa Kudya & Zvinwiwa Zvigadzirwa & Nezvigadzirwa Rubha & Mapurasitiki Chengetedzwa nekudzivirirwa Skin Care Mitambo & Varaidzo Textile & Leather Chigadzirwa Timepieces Zvishongo Ziso Tools & Hardware Mota & zvishongedzo